Raha te handroso na te ho tafita ambony amin'ny fiainana, dia mianara, miasa mafy, manàna tanjona sy fijery ambony, miafia raha ilaina, fa aza mionina na mampionon-tena ao anatin'ny faharatsiana ka hanao hoe "zara aza mba nisy an'izay". Na kely aza no tratra sy vitanao dia ataovy tsara hatrany. Esory ilay toe-tsaina hoe "indrokelin'ny mpandrafitra", na ilay hoe "tsy hitan'ny tsy nanao azy". Tafandria mandryPatrick
samedi, 31 octobre 2020 21:36
Mody asiana fifidianana Loholona ilazana fa misy demokrasia
Ka tsy efa ny mpitondra irery ve no manana kandida ho Loholona, ka maninona tsy mifandamina ao fotsiny ianareo samy ianareo, fa andany vola sy fotoana inona eo indray. Tafandria mandry ePatrick
Pilo kely : "Bagarreuse de marché" Bonne nuitPatrick
Rehefa vadinao manao paozy hafahafa iny, mba miteny mi menace anao, za tsy hiaraka aminao paozinao io, angaha ahoany, ianao indray asainy mitondra ilay sac mavesatra tsy hainao aby raha anatiny ao. Bonne nuit e.Patrick
Pilo kely: Ireo mpanadoka no tena mamelatra oditr'akondro Tafandria mandry ePatrick
mardi, 27 octobre 2020 19:42
Maro ireo nanohana miandry seza
Pilo kely: Maro ireo nanohana miandry seza, hatramin'izao miandry vasoka, dia vao miteny ianao dia lazaina fa mitady seza, nefa sezandreo seza rivotra Tafandria mandry ePatrick
Pilo kely: Anahidrano, Antsohihy Sofia, tanàna maro tantara, sarotra adinoina.Tandrema fa masiaka Dady tanàna ein, aza misôma azy fa somainy. Samy mandry monjogno.Patrick
dimanche, 25 octobre 2020 21:00
Malalaka ihany raha olona efatra no mpandeha
Pilo kely: Malalaka ihany raha olona efatra no mpandeha anaty fiaramanidina Airbus an. Tafandria mandry e.Patrick
Za mba niteny anikeo maraina fa tsara ny andro, hisy rahona sy oram-baratra kely eny antenatenany eny, kay cyclone mihitsy no nitsena ny phase de descente, atterrissage d'urgence, attachez vos ceintures, relevez les tablettes, ca va secouer. Sarlene kosa migafy e. Tafandria mandry abyPatrick
Pilo kely: Nametram-pialana ny praiminisitra lefitra Mona Sahlin tany Suède fa nividy sokola tamin'ny volam-panjakana " Affaire Toblerone " no niantsoana ity raharaha ity tany Suède tamin'ny fotoan'androny, nividy chocolat Toblerone ity praiminisitra lefitra ity tamin'ny carte bancaire fampiasa ara-panjakana. Nonerany aingana anefa io vidin-tsaokola io, fa mafy ny fepetra fitantanana sy ny mangarahara any Suède ka dia voatery nametram-pialana i Mona Sahlin, izay izy aza no tokony ho kandida ho filohan'ny antoko sosialy demokraty tany Suède tamin'izany.